‘सुआहारा’को चरम लापरवाही, गर्भवती र सुत्केरीलाई कुहिएका अण्डा ! - Everest Dainik - News from Nepal
‘सुआहारा’को चरम लापरवाही, गर्भवती र सुत्केरीलाई कुहिएका अण्डा !
म्याग्दी । म्याग्दीको एक गैरसरकारी संस्थाले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको छ। मिलन म्याग्दीद्धारा सञ्चालित सुआहारा कार्यक्रमले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई कुहिएको अण्डा वितरण गरेर उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको पाइएको छ। ‘जीवनको महत्वपूर्ण क्षण’ नाम दिइएको कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई सुआहाराले प्रतिमहिला दुईसय रुपियाँ बराबरका अण्डा वितरण गरेको हो। वितरण गरेका अण्डा सडेका र खानयोग्य नभएको पाइएको हो।
सुआहाराका फिल्ड कर्मचारीहरूले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई घरमै पुगेर १० वटा अण्डा दिएका थिए। उनीहरूले दिएको अण्डा खानयोग्य नभएको र सडेको अवस्थामा पाइएको महिलाहरूले गुनासो गरेका छन्। अण्डा खान योग्य छ वा छैन कुनै जाँच परीक्षण नगरी अण्डा वितरण गरिएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका मनकुमारी गर्बुजाले स्थानीय अमृत गर्बुजाको घरमा दिएको १० वटा अण्डा कुहिएको पाइएको हो। ‘घरमा आएर सामाजिक परिचालिकाले १० वटा अण्डा दिनुभएको थियो’ अमृत गर्बुजाले भनिन्, ‘बेलुका सुत्केरी श्रीमतीलाई बनाएर खुवाउँदा त सबै कुहिएको पाइयो।’ गर्बुजाले कुहिएका अण्डासहितको तस्वीर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत राखेका छन्। थाहखबरबाट साभार
याे पनि पढ्नुस घुस्याहा इञ्जिनियर र प्राविधिक बर्खास्त !
ट्याग्स: अण्डा, गर्भवती र सुत्केरी महिला, म्याग्दी